Madeira - ezikhangayo
Madeira yisiqhingi esingena e-archipelago enegama elifanayo enyakatho ye-Atlantic Ocean. Ifana kakhulu neyensimu, futhi ibhekwa njengenye yezindawo ezinhle zokuphumula. Ngisho nasekhulwini le-XIX, izindawo zayo ezinhle kakhulu zanqoba iYurophu, futhi iMiraira yaba yindawo yokuzijabulisa eyaziwayo kubantu baseYurophu.
Ngaphezu kokukhangayo kwemvelo, kunezindawo eziningi eMadayira okufanele zibonwe.
Indawo yokubalekela i-Madeira National Wildlife
Isiqhingi sezwe lesi siqhingi sakhiwa ngo-1982, sithatha izingxenye ezimbili kwezintathu zendawo yaso yonke futhi sihlukaniswe sibe izindawo eziningana ezihlukene. Iqukethe izindawo ezivikelekile kakhulu nezindawo zokuzilibazisa ezihlomele.
Izitidi zezitshalo ezisebhodini, ezisezintabeni zentaba, zibhekwa njengenye yezinto ezikhangayo ezivela eMadayira. Lapha ungathola izitshalo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili emhlabeni wonke, ungakujabulela ukuqoqwa kwezinyoni ezingavamile, uvakashele i-Museum of Nature History kanye neHerbarium. Lezididi zikahulumeni, futhi noma ubani angabavakashela.
Ipaki ye-Trees Trees
Leli paki elimangalisayo, liqoqe iqoqo lezinhlavu ze-dragon zase-macronesi, ezisemaphethelweni ekuqothulwa. Ipaki itholakala eSao Gonzalo, empumalanga yeFunchal, inhloko-dolobha yesiqhingi. Izihlahla ze-dragon zikhula kancane kakhulu, eziningi zazo zingamakhulu eminyaka ubudala.
I-Orchid Garden Quinta da Boa Vista
Lena ingadi yangasese lapho iqoqo lama-orchid elivela emhlabeni wonke liqoqwe khona, kunezibonelo ezithile ezingavamile kakhulu. Isikhathi esihle sokuvakashela le nsimu sisukela ngoMeyi kuya kuDisemba.
Enhloko-dolobha yaseMidora, Funchal, ungavakashela inani elikhulu lemyuziyamu namasonto.
Enye yezinto eziyinhloko zokwakhiwa kwezakhiwo zenhloko-dolobha yiyona indlu yase-Francisca esebenzayo yekhulu le-16, ongakwazi ukuzibandakanya nenqubo yokukhiqiza iMadera edumile.
I-Se Cathedral, eyakhiwe ngesitayela seGothic phakathi nendawo ye-Funchal, yenziwe nge-lava, futhi ukufakwa kwayo kuhlanganiswe ngokhuni nendlovu. Naphezu kwakho konke lokhu, akuyona njengokuhlobisa njengamanye amabandla esiqhingini, kepha lapha ungase uzwe umlando futhi uthandaze ngokuthula.
Kodwa iSonto LamaKatolika LaseSt. Pedro, ngokuphambene nalokho, kuyamangalisa ukuthi isonto elincane lihlotshiswe kahle (amakhilayane nemidwebo). Ngokuvamile bachitha imishado noma bavele beze ukulalela ukucula okuhle kwelaya yesonto.
Ama-Museums of Madeira
Isikhungo somlando saseMidara sakhiwa ukuze sijwayele umlando kanye nokuthuthukiswa kwesiqhingi saseMidara kanye nesiko labo. Ekukhangiseni, kuthiwa yi-museum esebenzayo, kodwa empeleni lapho ungakwazi ukujwayela kuphela inani elincane lephunga nemisindo.
Emnyuziyamu wenqaba yeSoo Tiago kukhona iMyuziyamu Yezobuciko, lapho kuqoqwe khona iqoqo elikhulu lama-artists asePutukezi, kusukela ngawo-1960. Imibukiso yangasese yabaculi besikhathi samanje nayo ihlelwe lapha.
Kunconywa ukuthi uvakashele ngokuvakasha indawo yokutholakala kweDiraira, uJoão Gonçalves Zarku, lapho manje i-Museum of Quinta das Kruzesh isendaweni. Indlu yasendulo, lapho iqoqo elicebile lemidwebo, ifenisha ye-antique, i-porcelain iqoqwe, lizungezwe ingadi enhle lapho ungabona khona izithombe eziningi, izimbali ezingavamile nezihlahla. Ungavakashela engadini mahhala.
Ukubheka umbono othakazelisayo womuzi wonke, udinga ukukhuphukela endaweni ephakeme kunazo zonke iMadraira emotweni yekhebula kusukela enhlokodolobha - iNtaba i-Monte, egcwele amapaki namasimu, futhi nansi yiJardin Tropical of the Palace of Monte.
Esiqhingini saseMedira, kunamabhishi ambalwa, amaningi ayo atholakala ogwini olusenyakatho lwePonta do Sol noCalheta. Amabhishi ezinhle zegolide anesihlabathi esinemithi angatholakala esiqhingini sasePorto Santo.
I-Madeira Water Park
Eduze edolobheni laseSanta Cruz yipaki yamanzi yaseMidora. Isayizi elincane (elenzelwe abantu abangu-1000) futhi alinamagquma angavamile, kodwa angathola ukuzijabulisa kokubili abantwana nabantu abadala.
E-Madeira, imihlangano ehlukahlukene yaminyaka yonke nemikhosi ivame ukuqhutshwa: ngoFebhuwari - February umkhosi (ikhophi encane yemikhosi yaseBrazil), ngasekupheleni kuka-Ephreli - ekuqaleni kukaMeyi - umkhosi wembali, futhi ngo-September - umkhosi wewayini.
Ukuze uvakashele iMiraira emangalisayo, uzodinga ipasipoti kanye ne- visa ye-Schengen .
Indlu kaKhan e Bakhchisaray
Amanzi Ipaki eZhlobin
I-Tashkent - ezikhangayo
I-Water Park "iKing Tut", i-Hurghada
I-St. Michael's Cathedral eKiev
I-volcano yedaka le-Tizdar
Yini ongayikhipha eCroatia?
Thailand noma i-Goa?
Uzoya kuphi amakhowe?
Izindlalelo zendawo emgodini
Abashadile abashadile uBruce Willis noDemi Moore bazobe befotshwa kuhlelo oluhlangene
Lump emqaleni - izizathu
I-Polyoxidonium - imijovo
I-Sybiloy National Park
ISt. Peter's Cathedral eRoma
Amabhuku ngokuzithuthukisa, okufanelekile ukufundelwa owesifazane
Ukuhlola igazi kwegazi - imingcele evamile
UNkosana uHarry wafika e-Antigua futhi wathola isimemo sokuba nesikhathi sokuzalwa
Izipho zokuzalwa zangempela
Indlela yokufunda ukuhamba kahle?
Vala i-ironing board
Insipho emnyama yase-Afrika
Umcwaningi weCambridge wayefaniswa no ... Kim Kardashian ?!